Cookies Policy Android ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Iyo LSSI-CE inoda isu tese tine blog kana webhusaiti ku yambira mushandisi nezvekuvapo kwemakuki, zivisa nezvavo uye unoda mvumo yekuzvirodha.
Chinyorwa 22.2 cheMutemo 34 / 2002. "Vanopa masevhisi vanogona kushandisa data kuchengetedza uye kudzorera michina pane terminal michina yevanogamuchira, chero ivo vakapa mvumo yavo mushure mekunge vapiwa ruzivo rwakajeka uye rwakazara pamusoro pekushandiswa kwavo, kunyanya, pazvinangwa zvekugadzirisa dhata, maererano nezvinopihwa neOrganic Law 15 / 1999, yaDecember 13, pane Kudzivirirwa kweData Yega ”.
Semunhu anotarisira ino webhusaiti, ndakaedza kuteedzera zvakanyanya kusagadzikana nechinyorwa 22.2 cheMutemo 34/2002 paSevhisi dzeRuzivo Sosaiti neElectronic Commerce maererano nemakuki, zvisinei, tichifunga nezvenzira iyo iyo internet nemawebhusaiti zvinoshanda, hazviwanzo kuitika kuti uve neruzivo rwakagadziridzwa pamakuki angashandiswa nevechitatu kuburikidza ino webhusaiti.
Izvi zvinoshanda kunyanya kune zviitiko apo ino peji rewebhu rine zvinhu zvakasanganiswa: ndiko kuti, zvinyorwa, zvinyorwa, mifananidzo kana mafupi mafirimu ayo anochengetwa kumwewo, asi anoratidzwa pane yedu webhusaiti.
Naizvozvo, kana iwe ukawana rudzi urwu rwemakuki pane ino webhusaiti uye ivo havana kunyorwa mune inotevera rondedzero, ndapota ndiudze. Iwe unogona zvakare kubata wechitatu bato zvakananga kukumbira ruzivo pamusoro pemakuki iwe aunoisa, chinangwa uye nguva yekuki, uye kuti yakavimbisa sei kuvanzika kwako.
Iwo makuki anoshandiswa neiyi webhusaiti
Cookies anoshandiswa pane ino webhusaiti yake uye yechitatu mapato Kuti uwane iwe neruzivo rwekubhurawuza zvirinani, unogona kugovana zvirimo pasocial network, kukuratidza ma ads zvichienderana nezvamunofarira uye kuwana manhamba evashandisi.
Semushandisi, unogona kuramba kusevenzverwa kwedata kana ruzivo nekuvharira makuki aya kuburikidza nekugadziriswa kwakakodzera kwebrowser yako. Nekudaro, iwe unofanirwa kuziva kuti, kana uchidaro, saiti iyi haina kushanda nemazvo.
Pasi pemashoko akabatanidzwa muChinyorwa 22.2 yeMutemo 34 / 2002 yeSevhisi yeRuzivo Society uye Elektroniki Commerce, kana iwe uchiramba uchiongorora., uchange uchipa mvumo yako yekushandiswa kwemakuki ayo ini chinyorwa pasi apa.
Makeke ari pawebhusaiti aya anobatsira ku:
Ita kuti webhusaiti iyi ishande nemazvo
Chengetedza iwe unofanirwa kupinda mukati mega nguva yaunoshanyira saiti ino
Rangarira zvigadziriso zvako panguva uye pakati pekushanya
Inokutendera kuti utarise mavhidhiyo
Kuvandudza kukurumidza kwewebhu / kuchengetedzwa
Kuti iwe unokwanisa kugovera mapeji nemasocial network
Ramba uchivandudza iyi webhusaiti
Ratidza iwe kushambadzira maringe nemaitiro ako okubhurawuza
Ini handifi ndakashandisa makuki ku:
Unganisa pachako ruzivo runozivikanwa (pasina mvumo yako yekutaura)
Unganidza ruzivo rwakakomba (pasina mvumo yako yekutaura)
Goverana ruzivo rwekuzivikanwa kwako kune wechitatu mapato
Chechitatu-bato makuki atinoshandisa pane ino webhusaiti uye kuti iwe unofanirwa kuziva
Iyi webhusaiti, kufanana nemazhinji mawebhusaiti, inosanganisira zvinhu zvinopihwa nevanhu vechitatu.
Dhizaini nyowani kana yechitatu-bato masevhisi zvakare anogara achiedzwa kune zvinokurudzirwa uye mishumo. Izvi zvinogona dzimwe nguva kushandura marongero ekuki uye kuti makuki asina kutsanangurwa mune ino mutemo anoonekwa. Izvo zvakakosha kuti iwe uzive kuti iwo makuki echinguvana ayo hazviwanzo kugara zvichikwanisika kumhan'ara uye kuti ivo vanongova chete nekudzidza uye kuongorora zvinangwa. Hapana mamiriro apo makuki anokanganisa kuvanzika kwako achashandiswa.
Pakati pezvakanyanya kugadzikana zvechitatu-bato makuki ndeiyi:
Izvo zvinogadzirwa nemabasa ekuongorora, zvakananga, Google Analytics kubatsira iyo webhusaiti kuongorora kushandiswa kwakaitwa nevashandisi vewebsite uye kugadzirisa kugona kwayo, asi hapana mhaka ivo vanobatana ne data iyo inogona kuzivisa mushandisi.
Google Analytics is web web analytics service yakapihwa neGoogle, Inc., kambani yeDelaware ine hofisi hombe iri ku1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, United States ("Google").
Mushandisi anogona kubvunza mhando yemakuki anoshandiswa neGoogle, Google+ Cookie neGoogle Mepu, zvinoenderana nezviripo papeji rayo nezve chii mhando yemakuki anoshandiswa.
Google Adwords yekutevera: Isu tinoshandisa Google AdWords kutendeuka yekutevera. Yekutendeuka yekutevera chishandiso chemahara chinoratidza zviri kuitika mushure kuti mutengi anodzvanya pane ako ma ads, kunyangwe ivo vakatenga chigadzirwa kana kusaina kune yako tsamba tsamba. Aya makuki anopera mushure memazuva makumi matatu uye haana ruzivo runogona kukuzivisa iwe pachako.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve tracking Google shanduko uye mutemo wekuvanzika.
Google AdWords Kumakisazve: Isu tinoshandisa Google AdWords Kutengesa zvakare iyo inoshandisa makuki kutibatsira kuburitsa yakanangidzirwa kushambadziro yepamhepo zvichienderana nekushanya kwakapfuura kuwebsite yedu. Google inoshandisa ruzivo urwu kuratidza kushambadzira pane akasiyana mawebhusaiti echitatu-bato paInternet. Aya makuki ave kuda kupera uye haana ruzivo runogona kukuzivisa iwe pachako. Ndokumbira kuti uende ku Google inoshambadza ziviso Yakavanzika kuti uwane rumwe ruzivo.
Iko kushambadzira kunogadzirwa neAdWords, kunoenderana nezvido zvemushandisi, kunoitwa uye kunoratidzwa kubva kune ruzivo rwunounganidzwa kubva pane zviitiko uye zviwanikwa zvinoitwa nemushandisi pane mamwe mawebhusayithi, kushandiswa kwemidziyo, zviwanikwa kana software yakabatana, kudyidzana zvimwe zvekushandisa zveGoogle (DoubleClick Cookies).
DoubleClick inoshandisa makuki kugadzirisa mushambadzi. Ma cookie anowanzo shandiswa kutaridza kushambadza zvichienderana nezvakanangana nemushandisi, kunatsiridza mashandiro emishandirapamwe nekudzivirira kuratidza kushambadzira uko munhu anenge atoona.
DoubleClick inoshandisa cookie ID kuti ichengete iyo ads yakaratidzirwa mune mamwe mabhurawuza. Panguva yekushambadza kushambadzira mubrowser, DoubleClick inogona kushandisa cookie ID yeiyo browser kuti utarise iyo DoubleClick ads yakatoratidzwa mune iyoyo browser. Iyi ndiyo nzira iyo DoubleClick inodzivirira kuratidza kushambadzira iyo mushandisi akatoona. Saizvozvo, ID ema cookie anotendera DoubleClick kunyora shanduko ine chekuita nezvezvikumbiro zveshambadziro, sekunge mushandisi paanoona chishambadziro cheFCC uye, gare gare, anoshandisa browser imwecheteyo kushanyira webhusaiti yevatengesi uye kutenga .
DoubleClick makuki haana ruzivo runogona kuzivikanwa. Dzimwe nguva, iyo cookie inowedzera chinongedzo chakafanana nechitarisiko kune ID cookie. Ichi chinongedzo chinoshandiswa kuona mushambadziro wekushambadzira uyo mushandisi waakange aratidzwa pachena; zvisinei, DoubleClick haichengeti chero imwe mhando yedata kuki uye, nekuwedzera, ruzivo haruzivikanwe pachako.
SeMushandisi weInternet, chero nguva iwe unokwanisa kudzima ruzivo rwune chekuita nezvekutarisira kwako maitiro, uye iyo inoenderana neiyo yakaratidza maitiro akaiswa, kuwana zvakananga uye mahara: https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=es . Kana mushandisi akagwinya basa iri, yakasarudzika ID mbiri yeC cookie ID mune browser yemushandisi inonyorwa ne "OPT_UTA" chikamu. Nekuti yakasarudzika cookie ID haisipo, iyo yakaremara kuki haigoni kubatana neiyo chaiyo browser.
WordPress: es mushandisi weiyo WordPress blog yekupa uye yekumisikidza chikuva, muridzi weNorth America kambani Automattic, Inc. Nezvinangwa zvakadaro, kushandiswa kwemakuki akadaro nehurongwa hakuna kumbobvira kuri pasi pekutonga kana manejimendi wemunhu anotungamira webhu, vanogona chinja mashandiro ayo chero nguva, uye nyora nyowani makuki.
Aya makuki haataure chero rubatsiro kune iye munhu anotungamira ino webhusaiti. Automattic, Inc., inoshandisawo mamwe makuki kuitira kubatsira kuziva uye kuteedzera vashanyi kunzvimbo dzeWordPress, kuziva mashandisiro avanoshandisa webhusaiti yeAutoattic, pamwe nekwavanoda kuwana kwazviri, se Inosanganisirwa muchikamu che "Cookies" chebumbiro rayo rekuvanzika.
Vhidhiyo mapuratifomu seYouTube anoshandiswawo
Kubatanidza Service Mapuratifomu (Ivo vanoisa browser remakuki kuteedzera kutengesa kwakatangira pane ino webhusaiti):
Amazon.com uye .es: Ireland.
Social network cookies: Cookies kubva pasocial network anogona kuchengetwa mubrowser yako paunenge uchivhura androidpop.com, semuenzaniso, kana iwe ukashandisa bhatani kugovana zvirimo mu androidpop.com musocial network.
Iwo makambani anogadzira makuki aya anoenderana nemasocial network anoshandiswa neiyi webhusaiti ane macheke avo ezvekushandisa.
Facebook cookie, sezvakapihwa mune yako Cookies Policy
Zvinoreva zvekuvanzika zvinoenderana necomputer yega yega uye zvinoenderana nezvakavanzika zvaunosarudza mumasetweti aya. Hazvina mhosva, kana iye munhu anokoshesa webhusaiti ino kana vashambadziri vanogona kuwana ruzivo rwunozivikanwa nezvekuki idzi.
Tevere, uye sezvinodikanwa nechinyorwa 22.2 cheiyo LSSI, makuki ayo anogona kuiswa akajairwa uchivhura webhusaiti ino akatsanangurwa:
ZITA KUSVIRA CHINANGWA
Own: Sessionmtsnb_referrer mtsnb_seen_2923
Ivo vanopera nguva yekupera kwechirongwa. Ivo vanochengeta ruzivo rwevashandisi uye zvikamu zvavo kuti vadzore ruzivo rwevashandisi.
NID __utma, __utmb, __utmc, __utmd, __utmz, __utmz 2 makore kubva pakugadziriswa kana kugadzirisa. Ivo vanokutendera kuti utarise webhusaiti uchishandisa iyo Google Analytics chishandiso, iri riri basa rakapihwa neGoogle kuwana ruzivo nezve kuwanikwa kwemushandisi kune mawebhusaiti. Mamwe e data rakachengetwa kuti awedzere kuongorora ndeaya: nhamba dzeshandisi akashanyira webhusaiti, mazuva ekushanya kwekutanga uye ekupedzisira kwemushandisi, nguva yekushanya, peji kubva iyo mushandisi yakawana webhusaiti. , injini yekutsvaga yakashandiswa nemushandi kuti asvike webhusaiti kana kubatanidza iwe wakasarudza, isa munzvimbo iyo kubva kune iyo mushandisi inowana, nezvimwe. Iyo yekugadziriswa kwemakuki aya inofanorongerwa nebasa rinopihwa neGoogle, ndosaka tichikurudzira kuti uongorore Peji yekuvanzika yeGoogle kuti uwane rumwe ruzivo nezve makuki iwe aunoshandisa uye nekumadzima iwo (nekunzwisisa kuti isu hatisi mhaka yezviri mukati kana chokwadi chemawebhusaiti echitatu)
.agumroad.com__ga Pakupera kwechirongwa Ndiyo chikuva yekutengesa mabhuku edhijitari.
30 mazuva Kuki iyi inoshandiswa kudzorera kunongedza, kufambisa zvakanaka, kuzivisa uye kutaurisa nezve kushambadzira kwepamhepo. DoubleClick inotumira cookie kubhurawuza mushure mekudhinda chero, kudhinda kana kumwe kuita kunoguma nekufona kune DoubleClick server. Kana iyo bhurawuza inogamuchira kuki, ino chengetwa mairi. Mamwe ruzivo
GetClicky_jsuid 30 mazuva Statistics Web Clicky Chishandiswa inoshandiswa kuunganidza kusazivikanwa webhusaiti mashandisirwo manhamba. Ruzivo rwunounganidzwa runosanganisira Internet Protocol (IP), browser mhando, Internet Service Provider (ISP), zuva / nguva chitambi, kureva / kupinda / mapeji / kuongorora maitiro, kutonga saiti, uye kufamba yemushandisi akatenderedza saiti. Mamwe mashoko anogona kuwanikwa pane Clicky peji zvakavanzika mazwi .
You Tube 2 makore mushure mekugadziriswa Iyo inotibvumidza isu kupinza YouTube mavhidhiyo. Iyi modhi inogona kuseta makuki pakombuta yako kana iwe ukangodzvanya pane yeYouTube vhidhiyo inoridza, asi YouTube haizochengetedze ruzivo rwunozivikanwa rwecookie kubva kune yakadzamidzirwa mavhidhiyo maonero uchishandisa yakasimbiswa yemhando yekuvanzika. Kuti uwane rumwe ruzivo shanya embedding information peji re YouTube
Acumbamail 2 makore mushure mekugadziriswa Iyo inonyorera jenareta mamwe mashoko
PYPF 1 mwedzi Technical cookies Simbisa kuchengetedza mukuwana iyo PayPal yekubhadhara chikuva. Ivo vanogona kubatana na paypbbob.com.
Maitiro ekuita uye kudzima makuki aya
Kana iwe usingade mawebhusaiti kuti aise chero makuki pane yako kifaa, unogona kugadzirisa ako maserver, kuitira kuti iwe ugovaziviswa kana chero amakuki adhindwa pasi pasi. Saizvozvo, iwe unogona kushandura iyo yekushongedza kuitira kuti bhurawuza inoramba makuki ese, kana chete munhu wechitatu cookies. Iwe unogona zvakare kudzima chero makuki ari kare pakombuta yako. Ramba uchifunga kuti uchafanirwa nekugadzirisirwa kugadziriswa kwega yega bhurawuza nemidziyo yaunoshandisa zvakasiyana
info (at) contact.online inoita kuti iwanikwe kune vashandisi vanoda kudzivirira kuisirwa kwekutanga kuki, cookies anowanikwa nekuda kweichi nevashandisi vanoonekwa sevakawanda:
Cookies mutemo yekupedzisira yakagadziriswa musi wa 18/04/2016